भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा पहिलोपटक बच्चाको ब्रेन ट्युमरको शल्यक्रिया • Health News Nepal
भक्तपुर, १४ चैत २०७८
डा. राजीब शाहको नेतृत्वमा भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा पाँच वर्षकी बालिकाको पहिलो पटक ब्रेन ट्युमरको सफल शल्यक्रिया भएको छ।
शल्यक्रियामस डा. शाह सँगै डा. पुरुषोत्तम बानियाँ, डा. उमेश खैतु, नर्स नीतेश तथा एनेस्थेसिया डाक्टरहरुको टिम र पोष्ट अप्रेटिभ केयरका नर्सिङहरुको टिम रहनुभएको थियो।
यो ट्युमर ब्रेनको भित्री भागमा रहेकोले समयमै उपचार हुन नसक्दा बिरामीको ज्यानै जान सक्ने अवस्था रहेको डा. राजीब शाहले बताउनुभयो।
डा. शाह भन्छन्; ब्रेन ट्युमर सफल पुर्वक भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा भइराखेको हुन्छ। बच्चाको ब्रेन ट्युमरको शल्यक्रिया चाहिँ पहिलो पटक भएको हो। समयमै ब्रेन ट्युमरको उपचार हुन सकेमा विरामी राम्रो हुन्छ।
अस्पतालमा सयौं ब्रेन ट्युमरका बिरामी स्पाइनल अर्थात् मेरुदण्डकाे सर्जरी दिनहुँ जसो भइरहेको हुन्छ र यहाँ आउने बिरामीहरु प्राय आर्थिक स्थिति कमजोर भएकाहरु उपचार गर्न आउने गरेको डा. शाहले बताए।
डा. शाहले भने, यो अस्पतालमा एकै ठाउँमा ब्रेन ट्युमरको शल्यक्रिया र रेडियोथेरापी, ब्रेन ट्युमर र स्पाइनल ट्युमरको शल्यक्रिया र किमो थेरापी आवश्यक परेको बेला एउटै ठाउँमा हुनाले बिरामीलाई उपचार गर्न सहज पुगेको छ।
लमजुङ जिल्लाको दुर्गम ठाउँमा जन्मेकी ५ वर्षकी सम्झना नेपालीलाई एकाएक टाउको दुख्ने, घाँटी यताउता चलाउन नमिल्ने भयो।
समीर नेपाली छोरीलाई लिएर मणिपाल शिक्षण अस्पताल पोखरामा गए। अस्पतालमा पुगेपछि डाक्टरले एमआरआई गर्न सुझाव दिए। रिपोर्टमा ब्रेन ट्युमर भएको पत्ता लाग्यो।
मणिपाल भन्दा राम्रो उपचार उपेन्द्र देवकोटा न्युरो मेमोरियल अस्पताल बाँसबारीमा हुन्छ भनेर सबैले सुझाब दिइएको काठमाडौं आएको समीर नेपाली बताउछन।
नेपालीका अनुसार आर्थिक अभावका कारण धेरै महंगो उपचार हुन्छ भनी डाक्टरले सल्लाह दिएकोले भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा गएको थियो।
ओपीडीमा चेकजाँच पछि एक हप्ता सम्म बेड भर्ना गर्न डा. राजीब शाहले सल्लाह दिनुभयो।
एक हप्ता पछि ब्रेन ट्युमरको सफल शल्यक्रिया भयो। ब्रेन ट्युमर र टाउकोमा पानी जमेर दुइटा अप्रेसन गर्नुपरेको थियो।
बालीका अप्रेसन पछि डिस्चार्ज भएर घरमा अराम गरिरहेकी छिन्। अप्रेसन पछि बालिका यताउता हिड्डुल गर्न सक्ने, खाना नियमित खाने र टाउको पनि कम दुखेको उनका बुबा समीर नेपाली बताउछन। अब बालिकालाई फ्लो अपमा रेडियसन थेरापी गर्नुपर्ने देखिएको छ।
समीर भन्छन्; डा. राजीव शाहलाई एकदमै हृदय देखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामीले छोरीको जन्म दिएपनि कर्म दिने उहाँ नै हुन। भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा उपचार गर्न पनि मलाई त्यति खर्च लागेन सस्तो र गुणस्तरीय उपचार गर्न पाउँदा म निकै खुसी छु।‌ मणिपाल अस्पताल र न्युरो अस्पतालमा लागेर लगभग एक लाख जति खर्च लाग्यो।
Tags: #Health and population ministryBhaktpur cancer HospitalBrain tumorCorona Virus #Covid19Dr. Rajeeb shah